Etu ị ga - esi nweta Ọdịnaya Ikike Ego Creative Commons na Mfe | Site na Linux
Etu esi achota ihe omuma ndi Creative Commons nyere ikikere
Ọtụtụ oge anyị chọrọ onyonyo, vidiyo ma ọ bụ faịlụ egwu mana anyị nwere ihe egwu nke ibudata ọdịnaya nwebiisinka.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ibudata faịlụ ikikere Creative Commons, nke akwụkwọ ikike nwebisiinka na-ekpuchighị, enwere ụfọdụ ntụnye aka nke na ọchụchọ maka faịlụ mgbasa ozi na-enweghị eze abụghị nsogbu kama ọ bụ ohere izute ndị ọzọ na-ese ihe na ọrụ ha.
Nke mbu, anyi nwere ike ichota onyonyo efu ma obu ikike Creative Commons Na Google, maka nke a, anyị ga-abanye 'Nnukwu Ọchụchọ' wee, n'ime nhọrọ ya, nyocha nyocha site na ikike ma họrọ nhọrọ nke ga-adabara mkpa anyị.
Ọ bụ ezie na ụzọ kachasị mma iji chọta nnukwu ọdịnaya na ikikere Copyleft dị na nke ya Creative Commons nzukọ nyocha engine. Site na ngwá ọrụ a dị egwu, anyị ga-achọpụta ọtụtụ foto na ọdịnaya ọdịyo ndị ọzọ na-enweghị ikike na ọrụ dị iche iche: Google, Flickr, Blip.tv, Jamendo, Wikimedia ma ọ bụ SpinXpress.
Ọ bara uru na-echeta na tupu anyị ejiri nke ọ bụla n'ime faịlụ ndị a, anyị ga-amata n'okpuru usoro nche anwụ nke iwu ọ bụ, ebe ọ bụ na n'ime ikikere nke Creative Commons enwere usoro dị iche iche nke onye edemede dere n'onwe ya: nkwenye, azụmaahịa, enweghị ọrụ mgbagha. .. na njikọ a ị nwere ike ịma ụdị dị iche iche nke ikikere Creative Commons.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Etu esi achota ihe omuma ndi Creative Commons nyere ikikere
Ndewo, daalụ maka edemede gị. You mara ụzọ ọ bụla ị ga - esi mara nke mgbasa ozi na Spain ma ọ bụ ná mba ọzọ na - eji Creative Commons? n'ihi na enwere igwe na-achọ ihe mana ọ bụrụ na ịmaghị aha ha apụtaghị. Daalụ
CHARLES MICHEL dijo
M na-akpọ gị òkù ka ị gee ntị na ekele m ESTAMOS CON VOS (MUSIC CC).
Anyị na-etinye ume na obi ụtọ n'ime egwu nwere onwe. Bọchị Satọde ọ bụla anyị na-ebugo mmemme ọhụrụ. Gee anyị ntị mgbe ọ bụla ịchọrọ ma họrọ ọkacha mmasị gị maka TOP 5.
Anyị na-enye batrị nkwado maka egwu nwere onwe nke anyị họọrọ site na ịgbasa ya na mmemme, na-ewepụta njikọ na ndị na-ege ntị ma na-enyere ha aka ịgbakwunye mmetụta uche na ha.
Zaghachi CHARLES MICHEL
Ndụmọdụ maka ịhọrọ nkesa GNU / Linux
Lenovo S1 Cell ekwentị